» नेपाल आईडलका निर्णायकले नै प्रविणलाई ‘उस्ताद’ भनेपछि
नेपाल आईडलका निर्णायकले नै प्रविणलाई ‘उस्ताद’ भनेपछि
१३ माघ २०७६, सोमबार १३:२३
मकवानपुर, १३ माघ । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो नेपाल आईडलमा अहिले गाला राउण्ड चलिरहेको छ । गाला राउण्डमा पुग्ने बित्तिकै प्रतियोगिता थप रोमाञ्चक भएको छ । बिहीबारको एपिसोडमा दमदार प्रस्तुति दिएर प्रविन बेड्वालले ‘कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे’ को अवार्ड समेत जितेका छन् । रोचक कुरा त के भने प्रतियोगिताको निर्णायकले नै प्रविणलाई उस्ताद भन्दै सम्मान दिएका छन् । बिहिबारको तेस्रो प्रस्तुतिमा चितवनका प्रविण बेड्वालले तहल्का मच्चाएका हुन् । प्रविणले दिएको प्रस्तुति नेपाल आईडल सिजन ३ को ऐतिहासिक प्रस्तुति सावित भयो किनभने उनको प्रस्तुतिमा विशेष अतिथि सहित तिनैजना निर्णायकहरुले स्टाण्डिङ अवेशन दिएका थिए । उनको प्रस्तुतिमा दर्शक तथा सहभागीहरुले समेत उठेर सम्मान प्रदान गरेका थिए । नरेन्द्र प्यासीको आवाजमा रहेको ‘के भुल भयो प्रिया’ बोलको गीत गाएका उनले ‘कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे’ को अवार्ड समेत जितेका छन् । अवार्डसँगै उनले नगद २० हजार रुपैयाँ पुरस्कार समेत प्राप्त गरेका छन् ।
उनको रेस्पेक्टेड पर्फोमेन्समा सबैले प्रशंसा गरे । निर्णायक ईन्दिरा जोशीले उनको खुलेर प्रशंसा गर्दै पावरफुल आवाजका साथ सबै हर्कतहरुले मन छोएको बताईन् । अर्का निर्णायक कालिप्रसाद बास्कोटा उनको आवाजको फिदा नै भए । उनले भने –‘जेनेरल्ली आफ्नो अगाडि कुनै ओस्तादले गाईरहनुभएको छ भने कमेन्ट गरिँदैन, जस्ट सुनिन्छ र लष्ट भईन्छ ।’ उनले प्रविणलाई सम्मान सहित स्टाण्डिङ अवेशन दिए अनि निर्णायक ईन्दिरा जोशी पनि उठिन् । कालिप्रसाद बास्कोटाले सम्मान पूर्वक उनलाई अभिवादन गरे अनि प्रविण पनि सम्मान सहित झुके । विशेष अतिथि जेम्स प्रधानले यस्ता प्रस्तुतिहरु हत्तपत्त सुन्न र हेर्न नपाईने बताए । आफ्नो सो दिन पनि निकै रमाईलो भएको भन्दै उनले प्रविणको प्रशंसा गरे । निर्णायक न्ह्यु बज्राचार्यले उनको हर्कत र कामहरुको प्रशंसा गर्दै यस सिजनमा फिमेलले जित्ला जस्तो लागेता पनि प्रविणको आवाजसँग सबै जना डराउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । त्यसपछि उनले ‘प्रविणको लागि सबै उठीदिउँ’ भन्दै सम्मान गरे । यो नै सिजन ३ को गाला राउण्डमा पहिलो रेष्पेक्ट पर्फोमेन्स बन्न सफल भयो । यसरी प्रविणले गाला राउण्डमा तहल्का मच्चाए । हेर्नुहोस् भिडियो–
प्रविणको भोटिङ कोड एनआई ०९ हो । उनलाई भोट गर्नका लागि नेपालबाट उनको भोटिङ कोड लेखेर एनटिसी, स्मार्ट सेल र एनसेलबाट ३७००० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । त्यस्तै १६६६७७०९ डायल गरेर उनलाई भोट गर्न सकिन्छ भने भारतबाट भोडाफोन मापःर्mत ५३०१० मा, कतारबाट ओरेडुमार्फत ९२३०० र मलेसियाबाट अल टेलिकोसमार्फत ३३३१० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । उनलाई रेस्पेक्ट एण्ड राईज एपबाट एउटा फ्री भोटका साथै तपाईले चाहानुभएको जति रकमको प्याकेज भोट एकैपटक गर्न सकिन्छ । ईसेवा, जेआरएफ, स्टाररेमिट, जी मनी ट्रान्स र ईन्ईन्टाईभ रेमिट मोबाईल एपबाट पनि उनलाई एकैपटक भोट गर्न सकिन्छ । नेपाल आईडल सिजन ३ मा सुमधुर आवाजका कारण चिनिएका प्रविणले यसअघि पनि आफ्नो प्रस्तुतिमा तहल्का मच्चाएका छन् । सुमधुर आवाजले दर्शकको मन जित्न सफल प्रविण चितवन निवासी हुन् । उनी २३ वर्षका छन् । उनी बुटवल अडिसनबाट छानिएका हुन् । उनले सँगीत विषयमा नै स्नातक गरेका छन् । आदरणिय दर्शकविन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा नेपाल आईडल सिजन ३ को विजेता को बन्नेछ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।